* ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ကွုံခဲ့ရတဲ့ သင်ျဘောရှကျအစှမျး – Askstyle
* ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ကွုံခဲ့ရတဲ့ သင်ျဘောရှကျအစှမျး
​ဆေးကုသိုလ်​ ရှယ်​​ပေးပါ.မိမိ ပတ်​ဝန်း​ကျင်​သိရ​အောင်
ကျွန်​​တော်​ ကိုယ်​တိုင်​ ကြုံခဲ့ရတဲ့ သ​င်္ဘောရွက်​ အစွမ်း ကျွန်​​တော်​ အိမ်​​ဘေး က ၂၂နှစ်​အရွယ်​ က​လေးမ​လေး​ရောဂါစဖြစ်​ပါတယ်​။သူတို့စဖြစ်​တဲ့ ​ရောဂါဟာ ​ဗိုက် မှာ ဘာရယ်​မသိတဲ့ အလုံး​လေးစတည်​လာပါတယ်​။
အဲ့မှာ ​တောဓ​လေ့ မြန်​မာပီပီအချို့က ​ဗိုက်​ကြီးတယ်​​ပြောလို့​ပြော လင်​​ပြောရမှာရှက်​တာ​နေမှာဆိုလိုဆိုနဲ့ မိဘ​တွေကလဲရိုးချက်​သားသမီးကိုမယုံပဲ သူများ​ပြောစကားနဲ့ က​လေးမ​လေးကို စတင်​ပြီး မကြည်​ပါ​တော့တယ်​။က​လေးမ​လေးမှာ ​ရောဂါထက်​ ပတ်​ဝန်းကျင်​ရိုက်​ခက်​မှု့ဒဏ်​​ကြောင့်​ ခုခံအားကျဆင်းလာပြီး တစ်​​နေ့ထက်​ တစ်​​နေ့ ပိန်​ခြုံးချိလာပါ​တော့တယ်​။
ဒီလိုနဲ့ မဖြစ်​တဲ့ အဆုံးမှာ ​ဆေးရုံ ကို စတင်​ပြီးတက်​ဖို့ ဆုံးဖြတ်​ရာက​နေ က​လေးမ​လေးမှာ စဖြစ်​ဖြစ်​ချင်း ​ရောဂါနု​ပေမဲ့ မိဘ​တွေရဲ့ ​ပေါဆမှု့ကြောင်း ​ရောဂါ ရင့်​ကြပ်​​နေခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုနဲ့ ​ဆေးရုံတင်​လိုက်​တဲ့ အချိန်​မှာ သအိမ်​ထဲမှာ အကြိတ်​ကင်​ဆာဖြစ်​​နေပြီးဆိုတာ စစ်​​ဆေးချက်​ထွက်​လာ​ပါ​တော့တယ်​။
ဒီလိုနဲ့ စ​ ဆေးရုံ တင်​လိုက်​တဲ့ အချိန်​မှာ ဓတ်​ကင်​ရတာနဲ့ ဘာနဲ့ဆို​တော့ က​လေးမ​လေး ​ခေါင်းမှာလဲ ဆံပင်​​တွေ က မယ်​သီလရှင်​ ​ခေါင်းတိုင်းဖြစ်​​နေပါ​တော်​သည်​။အစ ပထမပတ်​တက်​ရင်းနဲ့ကိုငွေ ၁၀သိန်း​ကျော်​​လောက်​ကုန်​ခဲ့ပါပြီး အ​ခြေခံလူတန်းစားဆို​တော့နဲနဲ​ငွေအင်းအားလဲ ချိ​နေပြီးရှာ​နေရပါပြီး။
ဒီလိုနဲ့ ​နောက်​တစ်​လပတ်​ကြာ​တော့ ဓတ်​ဒုတိယအကြိမ်​ ကင်​ရ​တော့မဲ့အချိန်​မှာ . မိခင် ​မှာ သူတွက်​ ​ငွေးတိုး ၁၅သိန်းချီးလာပြီးဆိုတာ ​ကောင်​မ​လေးကလဲ သိ​နေပါ​တော့သည်​။
ဆရာဝန်​ကြီး ကလဲ ​ပျောက်​မယ်​ဆိုတာ အာမခံကုသာကု​နေရတယ်​။ ဒီလိုနဲ့ ​ဆေးရုံကပြန်​လာ​တော့ ​အ​ခြေမဟန်​ ဆက်​ကုဖို့လဲ​ငွေအားကမနိုင်​ဆို​တော့ သမီး​လေး မှာ အ​မေရ ယ်​..သမီးမခံစားနိုင်​​တော့ဘူးသမီးကို မကုပါ​တော့နဲ့ သမီးအ​သေသာခံလိုက်​ပါ​တော့မည်​ဆိုပြီးငိုပါ​လေ​ရောလား။
ကျွန်​​တော်​ လဲ အဲ့အသံကြား Facebook ​ပေါ်က သ​ဘောင်္ရွက်​ အ​ကြောင်းက စာဖတ်​ ဒီလိုနဲ့ သွားတိုင်​ပင်​တယ်​။ဒီလိုဒီလို​တော့ရှိတယ်​ ကျွန်​​တော့်​ ကိုယုံလို့ရင်​ကျွန်​​တော်​ ​ပြောတဲ့ ​ဆေးနည်းကို​သောက်​မှာလား ကျွန်​​တော်​ ရှာ​ပေးမယ်​ဆို​တော့ ။မ​အေက​မလုပ်​ သမီးက​တော့အကိုရယ်​ ကျမ​သေလူပဲ အကိုဘာ​နေ​နေ သမီး အဆင်​​ပြေမယ်​ဆို​သောက်​ပါမယ်​လို့ ​ကောင်​မ​လေးက ခတ်​ချိချိ​လေးနဲ့ ကတုံး​လေး​ပြောရှာပါတယ်​။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်​​တော်​ ​ဈေး​ရောင်းသွားရင်​.ကုသိုလ်​ ​နေစဉ်​ရ​အောင်​ သ​င်္ဘော(အဖို)​​ရောက်​​လေအရပ်​တိုင်းရှာခူးပါ​တော့တယ်​၊။
သင်္ဘောရွက် (အဖို) ကို ငရုတ်ဆုံထဲ ထည့်ထောင်းပြီး အဖတ်ကို ပိတ်ဖြူထဲထည့် အရည် သီးသန့်ဖြစ်အောင် ညှစ်ချပြီး တနေ့ (အကြမ်းပန်းကန်လုံး) ၁ခွက် ကနေ ၂ ခွက် အများဆုံး သောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၁၅ရက်​ကြာ​တော့ ​ကောင်​မ​လေး ဆံပင် ​တစ်​ပင်​နှစ်​ပင်​စ​ပေါက်​လာတာကို ကျွန်​​တော်​ သတိထားမိလာပါတယ်​။ အစားကလဲ လူသာပိန်​​နေ​ပေမဲ့ ဘယ်​အစားအစားမှမ​ရှောင်​​တော့ပါဘူး။
​နောက်​တစ်​လ​လောက်​​နေ​တော့ လူက ပြည့်​ပြည့်​၀၀ နဲနဲဖြစ်​လာ​တော့ ​ကောင်​မ​လေး က ​ဆေးရုံကိုတစ်​​ခေါက်​​လောက်​သွားချင်​​နေပါ​တော့တယ်​။. သူသွားချင်​တဲ့အ​ကြောင်းရင်းက သူ​ ရောဂါ အ​ခြေ​နေကို သိချင်​​နေတဲ့ ဆန္ဒ ပြင်းပြရင်​ မနက်​​ဆေးရုံသွား ချက်​ချင်​ ဆရာဝန်​ကလဲ အန့်​​တွေ​အော ကျွန်​​တော်​ ဖို့လဲ မုန့်​​တွေဝယ်​လာပြီး အကို တဲ့ ကျမ အကြိတ်​မရှိ​တော့ဘူးတဲ့ ဆရာက ဘာ​ဆေး​တွေ​သောက်​တာလဲ ​မေး​နေတယ်​တဲ့ ။
ကျွန်​​တော်​ ​ဗျာ ဝမ်းသာလိုက်​တာ ကိုယ်​ကူညီလိုက်​တဲ့ ​သေမင်း​ရောဂါသယ်​က ​ပျောက်​ကင်းသွား​တော့ ဘဝမှာ အ​တော်​ကို ပီတိဖြစ်​တဲ့​နေ့ပဘဲ ဒါ​ကြောင့်​ သ​င်္ဘောရွက်​သည်​ ထို​ရောဂါတစ်​ခုထဲကိုသာ ​ပျောက်​​စေတာမဟုတ်​ပဲ အမျိုးမျိုး​သော အရာဆဲ​လ်တွေအမြစ်​​တွေကို​ခြေနိုင်​စွမ်းရှိတာမို့ ကင်​ဆာသမား​တွေအထူးသင့်​​တော်​တယ်​လို့ တိုက်​တွန်းနှိုး​ဆော်​ လိုက်​ရပါတယ်​။
အဖိုပင် ပါ သူ့ အမြစ် ကို သကြားနဲ့ရောပြုပ်ပြီးစားရင် အသည်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။အကြမ်းပန်ကန်လုံးနဲ့မနက်တခွက်ညတခွက်သောက်ပေးပါတပါတ်အတွင်းသိသာလာလိမ့်မယ အဖိုပင်ပါ သူ့အမြစ်ကို သကြားနဲ့ရောပြုပ်ပြီးစားရင် အသည်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။
သဘောပင် အဖို အမသိချင်ရင် အမြစ် အဖျားကိုကြည့်ပါ အမြစ်အခွပါရင်အမ အခွမပါရင်အဖို ။ကျနော်ကတော့သင်္ဘောရွက်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို ပြုတ်လည်းစားတယ် မီးမြှိုက်ပြီးလည်း ရေစင်စင်ဆေး ငပိချက်နဲ့တို့စားပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့ကျနော်ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့​ရောဂါအစာအိမ်​
Credit : chit thu yin kwin
ဆေးကုသိုလျ ရှယျပေးပါ.မိမိ ပတျဝနျးကငျြသိရအောငျ
ကြှနျတျော ကိုယျတိုငျ ကွုံခဲ့ရတဲ့ သင်ျဘောရှကျ အစှမျး ကြှနျတျော အိမျဘေး က ၂၂နှဈအရှယျ ကလေးမလေးရောဂါစဖွဈပါတယျ။သူတို့စဖွဈတဲ့ ရောဂါဟာ ဗိုကျ မှာ ဘာရယျမသိတဲ့ အလုံးလေးစတညျလာပါတယျ။
အဲ့မှာ တောဓလေ့ မွနျမာပီပီအခြို့က ဗိုကျကွီးတယျပွောလို့ပွော လငျပွောရမှာရှကျတာနမှောဆိုလိုဆိုနဲ့ မိဘတှကေလဲရိုးခကျြသားသမီးကိုမယုံပဲ သူမြားပွောစကားနဲ့ ကလေးမလေးကို စတငျပွီး မကွညျပါတော့တယျ။ကလေးမလေးမှာ ရောဂါထကျ ပတျဝနျးကငျြရိုကျခကျမှု့ဒဏျကွောငျ့ ခုခံအားကဆြငျးလာပွီး တဈနထေ့ကျ တဈနေ့ ပိနျခွုံးခြိလာပါတော့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ မဖွဈတဲ့ အဆုံးမှာ ဆေးရုံ ကို စတငျပွီးတကျဖို့ ဆုံးဖွတျရာကနေ ကလေးမလေးမှာ စဖွဈဖွဈခငျြး ရောဂါနုပမေဲ့ မိဘတှရေဲ့ ပေါဆမှု့ကွောငျး ရောဂါ ရငျ့ကွပျနခေဲ့ပါပွီ။ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံတငျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ သအိမျထဲမှာ အကွိတျကငျဆာဖွဈနပွေီးဆိုတာ စဈဆေးခကျြထှကျလာပါတော့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ စ ဆေးရုံ တငျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ဓတျကငျရတာနဲ့ ဘာနဲ့ဆိုတော့ ကလေးမလေး ခေါငျးမှာလဲ ဆံပငျတှေ က မယျသီလရှငျ ခေါငျးတိုငျးဖွဈနပေါတျောသညျ။အစ ပထမပတျတကျရငျးနဲ့ကိုငှေ ၁၀သိနျးကြျောလောကျကုနျခဲ့ပါပွီး အခွခေံလူတနျးစားဆိုတော့နဲနဲငှအေငျးအားလဲ ခြိနပွေီးရှာနရေပါပွီး။
ဒီလိုနဲ့ နောကျတဈလပတျကွာတော့ ဓတျဒုတိယအကွိမျ ကငျရတော့မဲ့အခြိနျမှာ . မိခငျ မှာ သူတှကျ ငှေးတိုး ၁၅သိနျးခြီးလာပွီးဆိုတာ ကောငျမလေးကလဲ သိနပေါတော့သညျ။
ဆရာဝနျကွီး ကလဲ ပြောကျမယျဆိုတာ အာမခံကုသာကုနရေတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံကပွနျလာတော့ အခွမေဟနျ ဆကျကုဖို့လဲငှအေားကမနိုငျဆိုတော့ သမီးလေး မှာ အမရေ ယျ..သမီးမခံစားနိုငျတော့ဘူးသမီးကို မကုပါတော့နဲ့ သမီးအသသောခံလိုကျပါတော့မညျဆိုပွီးငိုပါလရေောလား။
ကြှနျတျော လဲ အဲ့အသံကွား Facebook ပျေါက သဘောင်္ရှကျ အကွောငျးက စာဖတျ ဒီလိုနဲ့ သှားတိုငျပငျတယျ။ဒီလိုဒီလိုတော့ရှိတယျ ကြှနျတေျာ့ ကိုယုံလို့ရငျကြှနျတျော ပွောတဲ့ ဆေးနညျးကိုသောကျမှာလား ကြှနျတျော ရှာပေးမယျဆိုတော့ ။မအကေမလုပျ သမီးကတော့အကိုရယျ ကမြသလေူပဲ အကိုဘာနနေေ သမီး အဆငျပွမေယျဆိုသောကျပါမယျလို့ ကောငျမလေးက ခတျခြိခြိလေးနဲ့ ကတုံးလေးပွောရှာပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ကြှနျတျော ဈေးရောငျးသှားရငျ.ကုသိုလျ နစေဉျရအောငျ သင်ျဘော(အဖို)ရောကျလအေရပျတိုငျးရှာခူးပါတော့တယျ၊။
သင်ျဘောရှကျ (အဖို) ကို ငရုတျဆုံထဲ ထညျ့ထောငျးပွီး အဖတျကို ပိတျဖွူထဲထညျ့ အရညျ သီးသနျ့ဖွဈအောငျ ညှဈခပြွီး တနေ့ (အကွမျးပနျးကနျလုံး) ၁ခှကျ ကနေ ၂ ခှကျ အမြားဆုံး သောကျခဲ့ပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ၁၅ရကျကွာတော့ ကောငျမလေး ဆံပငျ တဈပငျနှဈပငျစပေါကျလာတာကို ကြှနျတျော သတိထားမိလာပါတယျ။ အစားကလဲ လူသာပိနျနပေမေဲ့ ဘယျအစားအစားမှမရှောငျတော့ပါဘူး။
နောကျတဈလလောကျနတေော့ လူက ပွညျ့ပွညျ့၀၀ နဲနဲဖွဈလာတော့ ကောငျမလေး က ဆေးရုံကိုတဈခေါကျလောကျသှားခငျြနပေါတော့တယျ။. သူသှားခငျြတဲ့အကွောငျးရငျးက သူ ရောဂါ အခွနေကေို သိခငျြနတေဲ့ ဆန်ဒ ပွငျးပွရငျ မနကျဆေးရုံသှား ခကျြခငျြ ဆရာဝနျကလဲ အနျ့တှအေော ကြှနျတျော ဖို့လဲ မုနျ့တှဝေယျလာပွီး အကို တဲ့ ကမြ အကွိတျမရှိတော့ဘူးတဲ့ ဆရာက ဘာဆေးတှသေောကျတာလဲ မေးနတေယျတဲ့ ။
ကြှနျတျော ဗြာ ဝမျးသာလိုကျတာ ကိုယျကူညီလိုကျတဲ့ သမေငျးရောဂါသယျက ပြောကျကငျးသှားတော့ ဘဝမှာ အတျောကို ပီတိဖွဈတဲ့နပေ့ဘဲ ဒါကွောငျ့ သင်ျဘောရှကျသညျ ထိုရောဂါတဈခုထဲကိုသာ ပြောကျစတောမဟုတျပဲ အမြိုးမြိုးသော အရာဆဲလျတှအေမွဈတှကေိုခွနေိုငျစှမျးရှိတာမို့ ကငျဆာသမားတှအေထူးသငျ့တျောတယျလို့ တိုကျတှနျးနှိုးဆျော လိုကျရပါတယျ။
အဖိုပငျ ပါ သူ့ အမွဈ ကို သကွားနဲ့ရောပွုပျပွီးစားရငျ အသညျးရောဂါပြောကျပါတယျ။အကွမျးပနျကနျလုံးနဲ့မနကျတခှကျညတခှကျသောကျပေးပါတပါတျအတှငျးသိသာလာလိမျ့မယ အဖိုပငျပါ သူ့အမွဈကို သကွားနဲ့ရောပွုပျပွီးစားရငျ အသညျးရောဂါပြောကျပါတယျ။
သဘောပငျ အဖို အမသိခငျြရငျ အမွဈ အဖြားကိုကွညျ့ပါ အမွဈအခှပါရငျအမ အခှမပါရငျအဖို ။ကနြျောကတော့သင်ျဘောရှကျလတျလတျဆတျဆတျကို ပွုတျလညျးစားတယျ မီးမွှိုကျပွီးလညျး ရစေငျစငျဆေး ငပိခကျြနဲ့တို့စားပါတယျထူးခွားခကျြကတော့ကနြျောဝမျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ရောဂါအစာအိမျ